यी ४ कारणले गर्दा महिलाहरु कण्ड’म लगाएर शारिरीक सुखभो’ग मन पराउँदैनन !!! – Sanjal Nepal
Homeरोचकयी ४ कारणले गर्दा महिलाहरु कण्ड’म लगाएर शारिरीक सुखभो’ग मन पराउँदैनन !!!
यी ४ कारणले गर्दा महिलाहरु कण्ड’म लगाएर शारिरीक सुखभो’ग मन पराउँदैनन !!!
February 17, 2021 admin रोचक 15377
शारिरीक सुखभो’ग एउटा यस्तो कुरा जुन सबैलाई आवश्यक हुन्छ तर कोही यसबारे कुरा गर्न आवश्यक ठान्दैनन् । आजको दिनमा यसका बारेमा समाजमा गलत धारणा विकास हुँदै गएको कारण यसको सकरात्मक भन्दा नकरात्मक असर धेरै देखा पर्दै गएको छ । पछिल्लो समय नेपालमा विवाह भन्दा पहिले हुने सम्बन्धलाई सामान्य रुपमा लिने गरिएको छ । यी सम्बन्धहरु सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने जानकारी भए पनि यसबारे धेरै जना व्यवहारिक भएको पाइदैन ।
असुरक्षित यौन सम्बन्धले धेरै खालका प्रभाव पार्न सक्दछ । नचाहेको अवस्थामा पनि बच्चा बस्ने देखि विभिन्न रोगहरु सर्ने सम्मका समस्याहरु हुन सक्छन् । यसको निवारणका लागि धेरै उपायहरु पनि बजारमा आएका छन् । अहिले सर्वाधिक चर्चामा रहेको साधन कण्ड’म हो । यसको प्रयोगले आरामदायक शारिरीक सुखभो’गमा लैजान सकिन्छ । तर पछिल्लो एक अध्यनले महिलाहरु कण्ड’म लगाएर गरेको भन्दा विना कण्ड’म गरिने सम्बन्धलाई विशेष महत्व दिने गर्छन । यसका केही कारणहरु पनि रहेका छन् । आज हामी यस बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौं ।
चर’म सुःखको कमी भन्ने भ्रम केही युवतीहरुका अनुसार कण्ड’म लगाएर शारिरीक सुखभो’ग गर्दा चर’म आ’नन्द मिल्दैन । यसै कारण उनीहरुलाई कण्ड’म लगाएको मनपर्दैन । उनीहरुलाई ‘स्किन टु स्किन टच’ मनपर्छ ।
बासना : केही युवतीहरुले कण्ड’मको बासनालाई लिएर आफ्नो साथिसँग विवाद गर्ने गरेको पाइएको छ । उनीहरुलाई कण्ड’मको बासना मनपर्दैन ।
एलर्जी : धेरैजसो महिलाहरुका अनुसार कण्ड’म प्रयोग गरेर शारिरीक सुखभो’ग गर्दा महिलाहरुलाई एलर्जी हुनेगर्छ । उनीहरु कण्ड’मका कारण तल्लो पेट पोल्ने गरेको बताउने गर्छन् ।
फुट्ने डर : शारिरीक सुखभो’गको समयमा महिलाहरुलाई कण्ड’म फुट्ने डरले निकै सताउने गर्छ । यसका कारण उनीहरुले चाहेजस्तो शारिरीक सुखभो’गको आनन्द लिन सक्दैनन् ।
अन्त्यमा जे सुकै भएपनि प्रत्येक जोडीले सुरक्षित शारिरीक सुखभो’ग गर्नुपर्छ । विभिन्न समस्या एवं रोगहरुबाट संक्रमण हुनुभन्दा सुरक्षित आनन्द लिनु नै हाम्रा लागि फलदायी हुन्छ । एजेन्सीहरुको सहयोगमा
आजको राशिफल वि.सं. २०७७ फाल्गुन ०५ गते बुधवार
यी हुन् ह’र्मोन असन्तुलन हुँदा देखिने स’मस्या, यस्ता सं’केतबाट गर्नुहोस् पहिचान,सबैले जनी राख्नु पर्ने
December 1, 2020 admin रोचक 7308
ओठलाई महिला सौन्दर्यको प्रतीक पनि मान्ने गरिन्छ। गुलाबी ओठ त महिलाहरुका लागि झनै आकर्षक मानिन्छ। जस कारण पनि अधिकांश महिलाहरु आफ्नो ओठ प्रति निकै सजक र सतर्क रहँदै आएका पाइन्छन्।तर ओठ खाली सौन्दर्यको खास पहिचान
December 10, 2020 admin रोचक 3070
January 22, 2021 admin रोचक 3426
युवतीहरुलाई आफू नुहाउदै गर्दा पनि विभिन्न खालको चिन्ताले सताउने एउटा अध्ययनले देखाएको छ । महिलाहरुले नुहाउदा आफ्नाे शरीर र कपालको बारेमा चिन्ता गर्छन् । यस बाहेक उनीहरु बाथरुमभित्र आफैसँग छिल्लिने गरेको समेत अध्ययनले पत्ता लगाएको
LEX 18 agenda conversation: Job club (502028)
सञ्जेललाई कुटपिट गर्ने कर्मचारी बर्खास्त, अभद्र व्यवहार मुद्दामा म्याद थप (473660)
Hello world! (399909)
A above Googler and career teach says you shouldn’t at all times flip your ardour intoaabounding-time job (365067)
dole traces grow as seasonal jobs dry up (123707)
Technology Training Company Coding Dojo to Open Boise Campus at Trailhead (106433)